आइपीएलमा एकै ओभरमा सर्बाधिक रन दिने ५ बलर - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) काे १३ औँ संस्करण नजिकिँदै छ । आइपीएल मिति नजिकिएसँगै क्रिकेट समर्थकमा उत्साह पनि थपिँदै गएको छ ।
विश्व चर्चित क्रिकेटरको सहभागितामा खेलिने आसन्न आइपीएल २९ मार्चदेखि सुरु हुँदैछ । यो वर्ष पनि लोकप्रिय क्रिकेटर आइपीएल खेल्दै छन् ।
यसैबीच आज आइपीएलमा एकै ओभरमा सर्बाधिक रन खर्चिने ५ क्रिकेटरको बारेमा जानकारी दिँदैछौं ।
१. बेसिल थम्पीः आइपीएलमा एकै म्याचमा सर्बाधिक रन दिने क्रिकेटरको सूचीमा बेसिल थम्पीको नाम पहिलो स्थानमा आउँछ । उनले २०१८ मा सनराइजर्स हैदरावादबाट आइपीएल खेलेका थिए ।
थम्पीले रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोर (आरसीबी) विरुद्ध खराब बलिङ गरेका थिए । उनले १७.५० को इकोनमी रेटमा ७० रन खर्चिएका थिए । यस खेलमा आरसीबीले २० ओभरमा २ सय १८ रन बनाएको थियो । जवाफमा हैदरावादले २०४ रन बनाएको थियो ।
२. मुजीब उर रहमानः यो सूचीको दोस्रो स्थानमा अफगानिस्तानका स्पिनर मुजीबउर रहमानको नाम आउँछ । किंग्स इलावेन पन्जावबाट आइपीएल खेल्ने उनले गत संस्करणमा सनराइजर्स हैदरावाविरुद्ध ४ ओभरमा ६६ रन खर्चिएका थिए ।
यो म्याचमा हैदरावादले २० ओभरमा २ सय १२ रन बनाएको थियो । २ सय १३ रनको लक्ष्यका साथ जवाफी ब्याटिङमा आएको पन्जावले १ सय ६७ रन मात्र बनाउन सकेको थियो ।
३. इशान्त शर्माः इशान्त शर्माले भारतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा शानदार रेकर्ड बनाए पनि आइपीएलमा भने खराब कीर्तिमान पनि आफ्नो नाममा लेखेका छन् । उनले २०१३ को आइपीएलमा सनराइजर्स हैदरावादबाट खेल्दै चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके)विरुद्ध ४ ओभरमा ६६ रन दिएका थिए । उक्त खेलमा सीएसकेले २० ओभरमा २ सय २३ रन बनाको थियो ।
४. उमेश यादवः आइपीएलमा एकै म्याचमा सर्बाधिक रन दिने खेलाडीको सूचीमा उमेश यादवको नाम चौथो स्थानमा आउँछ । उनले २०१३ को आइपीएलमा दिल्ली क्यापिटल्स (डेयरडेविल्स)बाट खेल्दै आरसीबीविरुद्ध ४ ओभरमा १६.२५ को इकोनमी रेटमा ६५ रन खर्चिएका थिए । यस म्याचमा आरसीबीले २० ओभरमा १८३ रन बनाएको छ । जवाफी ब्याटिङमा आएको दिल्ली ४ रनले पराजित भएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस दिल्लीमा थपिए अर्का लेग स्पिनर, अब सन्दीपलाई कति गाह्रो?
५. सन्दीप शर्माः २०१३ को सिजनबाट आइपीएल करियर सुरुवात गर्ने सन्दीपले शानदार प्रदर्शन गर्दै हालसम्म ७९ म्याचमा ९५ विकेट लिइसकेका छन् । यद्यपि उनको नाममा एकै म्याचमा धेरै रन दिने खेलाडीको खराब रेकर्ड पनि छ ।
आइपीएल २०१४ मा सन्दीपले सनराइजर्स हैदरावादविरुद्ध ४ ओभरमा १६.२५ को इकोनमी रेटमा ६५ रन दिन पुगेका थिए । यद्यपि यो म्याचमा शानदार ब्याटिङ गर्दै किंग्स इलावेन पन्जावले हैदरावादलाई ६ विकेटले हराएको थियो । –एजेन्सी
ट्याग्स: आइपीएल, इशान्त शर्मा, उमेश यादव, बेसिल थम्पी, मुजीब उर रहमान, सन्दीप शर्मा